အသစ်စက်စက် tesla လည်ပတ်မှုမျက်နှာပြင် 12.2 "ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
PX5 10.0 OS 2Din Universal 12.2 "Car Stereo  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူပျို 10.1 လက်မအရွယ် Android စတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Volkswagen အတွက် Android 10 Car Multimedia Player  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Fiat Ducato အတွက် Android 10.0 ကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
A-Class W169 ၂၀၀၄-၂၀၁၂ ကားမာလ်တီမီဒီယာလမ်းညွှန်စနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
VW Universal အတွက် Klyde ကားဒိုင်ခွက်လမ်းညွှန်စနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
E46 M3 အတွက် dash gps navigation ဖြင့် Android  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Multimedia2din android Qashqai အတွက် 2013-2015  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
universal အတွက် dash gps unit များတွင် Android 10  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Capture 2016 အတွက်ရေကြောင်းစနစ်ပါသောမာလ်တီမီဒီယာ  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
M5 E39 X5 E53 အတွက် android ကား GPS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ASTRA K 2017 android 10 မော်တော်ယာဉ်လမ်းညွှန်စနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
CORSA 2016 Android 10 မော်တော်ယာဉ် GPS စနစ်လမ်းညွှန်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
MOKKA 2017 android 10 ကားအသံလမ်းညွှန်စနစ်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Klyde SWIFT ၂၀၁၂ android ကားသွားလာမှု  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Yukon Tahoe 2012 Android 10 ကား GPS g navigation  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Klyde Aveo Epica Captiva2ကားကားစတီရီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Klyde Android 10 Universal သည်ကားစတီရီယိုကိုလှန်ပစ်လိုက်သည်  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Klyde Santa Fe 2006-2011 touch screen ကားရေဒီယို  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Klyde Android 10 Camry 2014-2015 ကားဖျော်ဖြေရေး  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အသစ်စက်စက် tesla လည်ပတ်မှုမျက်နှာပြင် 12.2 "ကားရေဒီယို
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 299 - 330 / Set/Sets
Supply နိုင်ခြင်း: 270000 pcs/year
min ။ အမိန့်:2Set/Sets
အသစ်စက်စက် tesla လည်ပတ်မှုမျက်နှာပြင် 12.2 "ကားရေဒီယို မျက်နှာပြင် pixel: 1280 * 800 (Super HD) OS: Android 9.0 စနစ် CPU: Rockchip PX6 (၃၃၉၉) Cotex A72 (1.8Ghz) + A53 (1.4Ghz),6Core RAM: 4GB ROM: 64GB Multi-touch screen မှာစွမ်းဆောင်နိုင်မှု GPS + ရေဒီယို + AUX IN + DVR BT 5.0 + DSP + HDMI output AHD...
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 205 - 230 / Set/Sets
PX5 10.0 OS 2Din Universal 12.2 "Car Stereo ပံ့ပိုးမှုစင်တာ GPS + ရေဒီယို + Bluetooth + USB + AUX + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP မျက်နှာပြင် pixel: 1280 * 800 (Super HD IPS) OS: Android 10.0 စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM: 4GB ROM: 64GB...
လူပျို 10.1 လက်မအရွယ် Android စတီရီယို
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 199 - 230 / Set/Sets
လူပျို 10.1 လက်မအရွယ် Android စတီရီယို ပံ့ပိုးမှုစင်တာ GPS + ရေဒီယို + Bluetooth + USB + AUX + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP မျက်နှာပြင် Pixel: 1024 * 600 OS: Android 10.0 စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM: 4GB ROM: 64GB Multi-touch screen...
Volkswagen အတွက် Android 10 Car Multimedia Player
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 230 - 250 / Set/Sets
Volkswagen Universal အတွက် Android 10 Car Multimedia Player ပံ့ပိုးမှုစင်တာ GPS + ရေဒီယို + Bluetooth + USB + AUX + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP မျက်နှာပြင် Pixel: 1024 * 600 OS: Android 10.0 စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM: 4GB ROM: 64GB Multi-touch...
Fiat Ducato အတွက် Android 10.0 ကားစတီရီယို
တစ်ခုချင်းစျေးနှုန်း: USD 250 / Set/Sets
Fiat Ducato အတွက် Android 10.0 ကားစတီရီယို ပံ့ပိုးမှုစင်တာ GPS + ရေဒီယို + Bluetooth + USB + AUX + DVR Input + Easy Connect / Mirror Link + WiFi + EQ + DSP မျက်နှာပြင် Pixel: 1024 * 600 OS: Android 10.0 စနစ် CPU ကို: Rockchip PX5 Cortex A53, 8 Core အဓိက Frenqency: 1.5GHz RAM: 4GB ROM: 64GB Multi-touch screen...
A-Class W169 ၂၀၀၄-၂၀၁၂ ကားမာလ်တီမီဒီယာလမ်းညွှန်စနစ်
A-Class W169 ၂၀၀၄-၂၀၁၂ ကားမာလ်တီမီဒီယာလမ်းညွှန်စနစ် ဒီယူနစ် A-Class W169 ကို Android 10 စနစ်ဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်သည့် android ကားလမ်းညွှန် သည်အသုံးပြုသူများကိုချောချောမွေ့မွေ့တုံ့ပြန်မှုကိုခံစားနိုင်သည်။ သင်လိုချင်သည့်ထောင်နှင့်ချီသောအက်ပ်များကိုတေးဂီတမှဂိမ်းသို့ကူးယူနိုင်သည်၊ A-Class W169 android ကားလမ်းညွှန် တွင်...
VW Universal အတွက် Klyde ကားဒိုင်ခွက်လမ်းညွှန်စနစ်
VW Universal အတွက် Klyde ကားဒိုင်ခွက်လမ်းညွှန်စနစ် Klyde VW Universal Vehicle Gps Navigation သည် Octa-Core ပရိုဆက်ဆာဖြင့်ရေဒီယိုသတင်းနှင့်မိုးလေဝသသတင်းများ၊ သီချင်းဖွင့်ခြင်းနှင့် APPs များလျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်မှုနှင့်အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်မှုကိုဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်သည်။ VW Universal Vehicle gps navigation တွင် WIFI modem ပါ ၀...
E46 M3 အတွက် dash gps navigation ဖြင့် Android
E46 အတွက် dash gps navigation ဖြင့် Android 10 သင်၏ကားအတွင်းပိုင်း၏အမြင်အာရုံကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အတွက် E46 အတွက်သင်၏ i dash gps navigation ၏အရောင်နှင့်ကိုက်ညီရန်ခလုတ်အလင်းရောင်အမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ E46 အတွက် dash gps navigation တွင် WIFI modem ပါ ၀ င်သည်။ WIFI function ကိုဖွင့ ်၍ မည်သည့်အခမဲ့ WIFI...
Multimedia2din android Qashqai အတွက် 2013-2015
Multimedia2din android Qashqai အတွက် 2013-2015 Qashqai အတွက် multimedia2din android ကို install လုပ်ပြီးချိန်တွင်တစ်စက္ကန့်သာကြာပြီးအခြားသူများကစက္ကန့် ၃၀ ခန့်ကြာမည်။ ဤယူနစ် multimedia2din android Qashqai အတွက် နောက်ဆုံးပေါ် Android 10 operating system,4+ 64G memory, Octa-core CPU၊...
universal အတွက် dash gps unit များတွင် Android 10
universal အတွက် dash gps unit များတွင် Android 10 ဤ VW Universal android car GPS စနစ်ရှိသင်၏ဖုန်း၏အွန်လိုင်း GPS ကိုထင်ဟပ်ပြသခြင်းကိုကြည့်ရှုရန်အလားအလာကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြည့်ရှုရန်ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ Android ဖုန်းအတွက် USB cable connection မှတစ်ဆင့်သင် unit ကိုထင်ဟပ်ပြနိုင်သည်။ အကယ်၍ AirPlay ကို...
Capture 2016 အတွက်ရေကြောင်းစနစ်ပါသောမာလ်တီမီဒီယာ
Capture 2016 အတွက်ရေကြောင်းစနစ်ပါသောမာလ်တီမီဒီယာ သင်၏ဖုန်း၏အွန်လိုင်း GPS ကိုဤ Capture 2016 မော်တော်ယာဉ် gps လမ်းညွှန် တွင်ထင်ဟပ်ပြသပြီးအညွှန်းအလားအလာကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက်ဤလုပ်ဆောင်မှုသည်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်သည်။ Android ဖုန်းအတွက် USB cable connection မှတစ်ဆင့်သင် unit ကိုထင်ဟပ်ပြနိုင်သည်။ အကယ်၍...
M5 E39 X5 E53 အတွက် android ကား GPS
M5 E39 X5 E53 အတွက် Android ကား gps ဤ E39 အတွက် Auto Navigation Systems သည် Bluetooth အမျိုးအစား ELM327 OBD2 စကင်နာနှင့် WIFI OBD2 အများစုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည် လိုက်ဖက်တဲ့လျှောက်လွှာ: Torque ခင်းကျင်းပြသထားသည့်ဒေတာများ - ကားကွန်ပျူတာများမှအချိန်နှင့်တပြေးညီအချက်အလက်နှင့်ပြcodesနာကုဒ်များ။ E39...
ASTRA K 2017 android 10 မော်တော်ယာဉ်လမ်းညွှန်စနစ်
ASTRA K 2016-2017 android 10 မော်တော်ယာဉ်လမ်းညွှန်စနစ် မြင့်မားသော IPS မျက်နှာပြင်ရှိ ဤယူနစ် ASTRA K မော်တော်ယာဉ်လမ်းညွှန်စနစ် ။ 1080P HD ဗွီဒီယိုများ၊ အသံလှိုင်းအသံအသံထုတ်လွှတ်မှုနှင့်သီးခြားထိန်းချုပ်မှုတို့ကိုထောက်ပံ့သည်မှန်ချိတ်ဆက်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင်၏ iPhone ကိုကြိုးမဲ့သို့မဟုတ် Android စမတ်ဖုန်းဖြင့် USB...
CORSA 2016 Android 10 မော်တော်ယာဉ် GPS စနစ်လမ်းညွှန်
CORSA 2015-2016 Android 10 မော်တော်ယာဉ် GPS စနစ်လမ်းညွှန် dash navigation အတွက် ဒီယူနစ် CORSA Android 10 ကို လက်ဖြင့်ဖုန်းခေါ်ခြင်းအတွက် External Microphone ထည့်သွင်းထားသည်။ audio streaming, ဖုန်းစာအုပ်, အမြန်ရှာဖွေအဆက်အသွယ် function ကိုထောကျပံ့။ နောက်ဆုံးပေါ် Android 10 operating system၊4+ 64G memory, Octa-core...
MOKKA 2017 android 10 ကားအသံလမ်းညွှန်စနစ်
MOKKA 2017 android 10 ကားအသံလမ်းညွှန်စနစ် ဤယူနစ် MOKKA android 10 gps နှစ်ဆ din ဒင်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် Android 10 operating system,4+ 64G memory, Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS ပါ ၀ င်သည်။4* 50w စူပါပါဝါချဲ့စက်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံခံစားမှုအတွက် EQ ၏ muti-adjustmentMOKKA android 10 gps...
Klyde SWIFT ၂၀၁၂ android ကားသွားလာမှု
SWIFT 2011-2012 android ကားသွားလာမှု ဤယူနစ် SWIFT android gps သည် Android 10 operating system,4+ 64G memory, Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS ပါ ၀ င်သည့်နောက်ကင်မရာပါ ၀ င်သည်။4* 50w စူပါပါဝါချဲ့စက်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံခံစားမှုအတွက် EQ ၏ muti-adjustmentပြောင်းပြန်ကင်မရာပါသည့် SWIFT...
Yukon Tahoe 2012 Android 10 ကား GPS g navigation
Yukon Tahoe 2007-2012 Android9car gps navigation နောက်ဆုံးပေါ် Android 10 operating system၊4+ 64G မှတ်ဉာဏ်၊ Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS ပါ ၀ င်သည့် Tahoe Android 10 ကားသွားလာမှု။4* 50w စူပါပါဝါချဲ့စက်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံခံစားမှုအတွက် EQ ၏ muti-adjustmentTahoe Android 10...
Klyde Aveo Epica Captiva2ကားကားစတီရီယို
Klyde Aveo Epica Captiva2ကားကားစတီရီယို ဒီယူနစ် Aveo Epica Captiva ကို Android 10 operating system,4+ 64G memory, Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS နှစ်ဆသောဒီဒင်း။4* 50w စူပါပါဝါချဲ့စက်များနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံခံစားမှုအတွက် EQ ၏ muti-adjustmentBluetooth လက်ဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုများ၊...
Klyde Android 10 Universal သည်ကားစတီရီယိုကိုလှန်ပစ်လိုက်သည်
Klyde Android 10 Universal သည်ကားစတီရီယိုကိုလှန်ပစ်လိုက်သည် နောက်ဆုံးပေါ် Android 10 operating system၊4+ 64G memory၊ Octa-core CPU၊ အရည်အသွေးမြင့်စိတ်ကြိုက်ရေဒီယို RDS ဖြင့်ပြန်လည်တပ်ဆင်ထားသောဤယူနစ် Android 10 Universal autoradio ကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။4* 50w...
Klyde Santa Fe 2006-2011 touch screen ကားရေဒီယို
Klyde Santa Fe 2006-2011 touch screen ကားရေဒီယို ပိုကောင်းတဲ့ရေဒီယိုဧည့်ခံနှင့်အတူ NXP TEF6686: 1. Android ကို 10 မေး, Octa Core, 4GB RAM ကို, 64GB ROM ကို, အရည်အသွေးမြင့်ရေဒီယို IC ။ ၂။ DSP ပါ ၀ င် သည့်ဒီဂျစ်တယ်အသံပရိုဆက်ဆာ၊ ဂရပ်ဖစ်ညီမျှခြင်း ၃၀၊ ချိန်ညှိနိုင်သောအသံလွှင့်စက်။...
Klyde Android 10 Camry 2014-2015 ကားဖျော်ဖြေရေး
Klyde Android 10 Camry 2014-2015 ကားဖျော်ဖြေရေး ဤ Klyde Android 10 Camry ကားဖျော်ဖြေရေးသည်လျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်မှုနှင့်ရေဒီယိုသတင်းများ၊ ရာသီဥတုသတင်းများ၊ တေးဂီတဖွင့်ခြင်းနှင့် APPs လည်ပတ်မှုများအတွက်အဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် Octa-Core ပရိုဆက်ဆာမှစွမ်းအားရှိသည်။ ဒီ Android 10 Camry...
Car DVD ပလေယာများ Car Stereo Car multimedia player Car GPS navigation ကားအသံ ကားရေဒီယို Elantra 2016 အသံစနစ်များ Camry အတွက်ကား DVD Gps